Home Wararka Qoorqoor oo Xamar ka Cararay iyo Ahlu Sunna oo Qabsaday Guriceel...
Qoorqoor oo Xamar ka Cararay iyo Ahlu Sunna oo Qabsaday Guriceel sii Socda.
Axmed Qoor-qoor iyo Sanataro katirsan Galmudug oo Muqdisho si hal haleel ah uga orday, ayaa si degdeg ah ku gaaray magaalada Dhuuso-mareeb ee caasimadda Galmudug. Arrintan waxay ka dhalatay kadib markii ay Ahlu Sunna Wal jaamaca u soo dhaqaaqeen inay la wareegaan Galmudug si tartartiib ah oo degmaba tan kale ka sii qabsanayaan.
Safarka Qoorqoor iyo Sanetarada ayaa kusoo aaday saacaddo kadib markii Ahlusunna ay la wareegeen degmada Guriceel, isla markaana uu gobolku ka socdo dhaqdhaqaaqyo ciiddan oo iska soo horjeeda.
Qoorqoor oo xoogaa ciidan Gorgor ah Xamar ka sii qaatay ayaa ka degay Dhuusamreeb oo ammaankeeda aad loo adkeeyey, waxaasa jirta cabsi xoogan in ay Ahlusunna soo galaan Dhuusamareeb.
Qoor-qoor ayaa muddooyinkaan dambe waxaa uu hoos fadhiyey Farmajo , waxaanu ku maqnaa Muqdisho muddooyinkii ugu dambeyey, isagoo waday dadaallo Farmajo lagula soo celinayo awooddii dalka oo uu wareejiyey, hasa yeeshee ku guuldarreystay kadib markii tiisiina uu dayacay tii qarankana dhib weyn u geystay.
Wuxuusa Qoorqoor haatan wajahayaa caqabad weyn oo dhinaca Ahlusunna kaga imaanaysa, xilli uu dalku jiro arrimo doorasho.